Fitsidihan'ny Praiminisitra tao Nosy Be | Primature
Fitsidihan’ny Praiminisitra tao Nosy Be
Mahazoarivo, ny 08 mey 2021 – Nitsidika ny distrikan’i Nosy Be, Faritra Diana, ny delegasionim-panjakana notarihin’ny Praiminisitra sady Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany maraina, nanatanteraka fivoriana arak’asa nandaminana ny fampihodinana ny fiainam-bahoaka ankapobeny sy ny fandriampahalemana, ka tao anatin’izany ny fizaràna fanampiana avy amin’ny fitondrana, ho an’ireo tena marefo; ary nijery ifotony ny fandrosoan’ny asa fanamboarana fotodrafitrasa ho amin’ny fampandrosoana.
Notsiahivin’ny Praiminisitra fa nisy fe-potoana nanokafana an’i Nosy be tamin’ny fifaneraseràna iraisam-pirenena satria ny fizahan-tany no seha-pihariana voalohany ao an-toerana, amin’ny lafiny toe-karena. Ny zavatra nisy anefa dia nanomboka tsy voafehy ny tranga corona virus ary nitombo ny isan’ireo maty, ka nitaraina nila vonjy tamin’ny Filoham-pirenena ny vahoaka tao Nosy be. Rehefa natao ny fanadihadiana ara-pahasalamàna dia voaporofo mazava fa ny fisokafan’ny fitaterana anabakabaka iraisam-pirenena sy ny fifamezivezena no nahatonga izany. Teo no nandraisan’ny Filohan’ny Repoblika, ho fitsinjovana ny vahoaka Malagasy, ny fanapahan-kevitra nampihato ny sidina avy any ivelany ary nanakatona ny distrikan’i Nosy Be. Vokatr’izany dia hita ankehitriny fa tsy misy intsony ny tranga vaovao sy ny marary mafy.
Fantatra anefa ny fiantraikan’izany teo amin’ny fiainam-bahoaka, hoy ny Praiminisitra, ka narahina fanapahan-kevitra hafa noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra, dia ny hanampian’ny fitondram-panjakana ny vahoaka marefo, amin’ny alalan’ny tetikasa FID, vola 50.000 ariary isam-bolana, ka nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany ny fanatanterahana an’izany, ary ho an’ny distrikan’i Nosy Be manokana dia fianakaviana miisa 2559 no hisitraka an’ity fanampiana ity. Nomarihin’ny Praiminisitra teto fa tsy mba manavakavaka ny fitondrana, fa mijery ny marary amin’ny vahoaka.
Notanterahina niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra tany an-toerana ny fivoriana arak’asa ary nahafahana nijery lafiny maro amin’ny fiainam-bahoaka. Voalohany tamin’izany ny resaka fahasalamàna ka nisaotra an’ireo olom-boafidy sy ny olom-boatendry ny Praiminisitra, ny amin’ny nanarahana ny toromarika napetraka sy ny ezaka vitan’izy ireo, ary dia nisarika ny sain’ny olona tsirairay mba hanaja hatrany ny fepetra sakana sy ny fitandremana rehetra efa natao hatrizay ny tenany.
Ny faharoa dia ny lafiny filaminana sy fandriampahalemana, nisy teboka maromaro noresahina ary tokony handraisana andraikitra ny fampiharana azy, hoy ny Lehiben’ny governemanta. Ohatra amin’izany ny fanaraha-maso mba tsy hisian’ny olona mifindra monina tsy ara-dalàna avy ao Nosy be ho any ivelan’i Madagasikara, na miditra an-tsokosoko avy any ivelany sao sanatria mitondra valanaretina. Toy izany koa ny amin’ny lamina tokony hipetraka amin’ny resaka fivezivezena eto an-toerana, indrindra ny resaka tsy fanarahan-dalàna.
Ny lafiny fahatelo, araka ny fanazavàna nentin’ny Praiminisitra ihany, dia ny sosialim-bahoaka: zava-dehibe amin’ny fitondram-panjakana izany ary ikelezany aina, ka ankoatra ny fanomezana isam-bolana dia ho tonga ao Nosy Be ny vary mora ary hisy tetikasam-pivoarana maro hovatsian’ny fanjakàna, hampiroboroboana hatrany ny resaka sosialy. Isan’izany ny tetikasa PIC izay hitondra fiofanana mba hahafahan’ireo vahoaka mamorona asa ho an’ny tenany; eo ihany koa ny fanosehana ny sehatra fitrandrahana ny ylang ylang, sy ny maro hafa.
Nanome toromarika mikasika ny hanalefahana ny fe-potoana handoavan’ny mpanjifa ny taratasim-bolan’ny Jirama, ny Praiminisitra, ka ao anatin’izany dia anjaran’ny mpanjifa no manatona milaza ny fahafahany mandoa, ary notsindrian’ny Praiminisitra manokana ny tsy hisian’ny fanapahana jiro na rano. Naato ihany koa ny fandoavan-ketra ho an’ireo sehatr’asa rehetra mifandray amin’ny fizahan-tany.
Eo amin’ny resaka fotodrafitrasa dia nambaran’ny Praiminisitra fa mijaly amin’ny resaka trano i Nosy Be ary tsy mba nisy fikasàna fanaovan-trano avy amin’ny fitondrana hatrizay. Manoloana izany, dia hampidirina ao anatin’ny “programme logements sociaux” i Nosy Be ankehitriny, ary rehefa izany dia hisitraka trano ireo vahoaka. Efa mandeha ny asa fanorenana amin’izao fotoana izao, ary teto dia notsiahivin’ny Praiminisitra ny momban’ny resaka fotodrafitrasa hafa ho fanohizana ny fampivoarana ankapobeny, toy ny kianja filalaovana manara-penitra izay efa eo am-panamboarana ihany koa, sy ny resaka lalana. Nohazavainy fa azo lazaina ho efa manana ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny fahafahana mandray olona i Nosy Be, ka rehefa vita soa aman-tsara ny kianja dia heverina fa ho tonga hatramin’ny fandraisana fifaninanana iraisam-pirenena mihintsy, ary izany rehetra izany dia hiomanana amin’ny fitohizan’ny fampivoarana aorian’ny ady amin’ny valanaretina covid-19.
Teo am-pamaranana moa dia nanolotra fisaorana ho an’ny vahoaka sy ny tompon’andraikitra rehetra ny Praiminisitra, ary nilaza fa “Ny tanjon’ny fitondram-panjakana amin’izao hetsika rehetra izao dia ny mba hahafahan’ny vahoaka Malagasy miatrika izao zava-misy izao ao anatin’ny fitonian-tsaina, kanefa kosa mitoetra ho tompon’andraikitra avokoa ny tsirairay”.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 05 Mai 2021
Conseil du gouvernement du Mercredi 12 mai 2021 →